मुत्रथैलीमा पत्थरी हुने संभावना धेरैलाई हुन्छ । यस्तो समस्या महिलाको तुलनामा पुरुषमा बढी हुन्छ । भनिन्छ, पत्थरीको रोगीमा ९५ प्रतिशत पुरुष हुन्छ । मूत्र’थैलीको पत्थरी मूत्र’थैलीमा मिनरल्स क्रिस्टलीकरण हुने कारणले बन्छ । साथै पिशाबमा पानीको मात्रा कमी हुँदा पनि यस्तो समस्या देखिन्छ । आवश्यक्ताभन्दा बढी मिनरल्सले पनि यस्तो समस्या निम्त्याउँछ ।
– पेटको तल्लो भागमा पीडा तथा जल’न हुन्छ ।
– पिसाब फेरेको बेला जल’न वा पीडा हुन्छ ।
मूत्र’थैलीमा पत्थरी किन हुन्छ ?
१. मूत्र’थैलीमा इन्फेक्सन हुँदा
मूत्र’थैलीमा पत्थरी हुने पछिल्लो र मूख्य कारण हो, मूत्र मार्गमा इन्फेक्सन, जो मूख्य रुपले जीवाणुद्वारा हुन्छ । पुरुषको तुलनामा महिलामा यस्तो संक्रमण कम हुनुको कारण हो, महिलाको मूत्रमार्ग छोटो हुन्छ ।
४. मूत्र’थैली कमजोर हुनु
मूत्र’थैली कमजोर भएपछि त्यसको भित्तामा थैली बन्छ । उक्त थैलीमा पिसाब जम्मा हुन थाल्छ र समस्या निम्त्याउँछ ।
३. मूत्र’थैलीको पत्थरीको घरेलु उपचार गर्ने हो भने, रोगीलाई केहि दिनसम्म कागती पानी, सुन्तलाको जुस, अधिक पानी पिउनुपर्छ ।